IEBC oo cambaareysay dilka sarkaal u qaabilsanaa Tiaty | Star FM
Home Wararka Kenya IEBC oo cambaareysay dilka sarkaal u qaabilsanaa Tiaty
IEBC oo cambaareysay dilka sarkaal u qaabilsanaa Tiaty
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada dalka ee IEBC ayaa si kulul u cambaareeyay fal lagu dilay maamule ku xigeenkii guddiga ee deegaanka Tiaty ee ismaamulka Baringo.
IEBC ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in markii ugu dambeysay ee Brian Silale la arkay isagoo nool ay ahayd xilli ay dad aan haybtoodu la garan ay kala baxeen xarunta dukaameysiga ee Chemolingot 19-kii bishan abaare 3-dii galabnimo.
Waxay wararku sheegayaan in Silale iyo shakhsiyaad kale la dilay iyadoo hal maalin ka dib meydadkooda la helay.
IEBC ayaa dhanka kale tacsi u dirtay qoyska uu baxay sarkaalkan waxayna dowladda ugu baaqday inay dardargeliso baaritaannada la xiriira dhacdadan si gacanta loogu soo dhigo ka dibna loo maxkamadeeyo cidii dilka gaysatay.
Previous articleDHAGEYSO:Saraakiishii dilay guddoomiyihii degmada Hodan oo la xiray
Next articleDHAGEYSO:Kulan looga hadlay xaaladda noololeed ee ka jirta degmada Mahadaay